Halkee laga helaa xarfaha curisyada ugu xarrago badan | Hal-abuurka khadka tooska ah
Halkee laga helaa xarfaha curisyada ugu xarrago leh
Iris Gamen | 25/03/2022 21:30 | dhowr
Haddii aad tahay xirfadle naqshadeeye ama haddii aad si fudud u rabto inaad ballaariso buug-gacmeedkaaga, daabacaadan waxaan ku siin doonnaa liiska boggaga ugu fiican ee lagu soo saaro qoraal-qoraal xarrago leh. Marka laga soo tago boggaga la soo dejisan karo, waxaan ku siin doonaa xul xarfo xarrago leh oo aad ku shaqeyso.
Marka ay tahay in aan wajahno mashruuc cusub oo naqshadeyn ah, habka xulashada daabacaad ku habboon ayaa ah tillaabada muhiimka ah ee farshaxanka ugu dambeeya si uu u noqdo kan ugu fiican. Qoraalku waa mid ka mid ah Qalabka ugu muhiimsan ee naqshadeynta sidaas darteed waa in si taxadar leh loo doortaa, iyadoo mar walba lagu xisaabtamayo qaabka mashruuca ee naga horreeya.
1 Mareegaha ugu fiican ee laga soo saaro xarfaha cursive
1.1 Google Faraha
1.2 Xariiqa xariiqa
1.3 Font River
1.4 Font Space
1.6 Farta Abstract
1.7 1001 Fon
1.8 Magaalooyinka Fonts
2 Waraaqo xarrago leh oo xarrago leh
2.2 Qoraalka Qoob-ka-ciyaarka
2.3 Script Script
2.7 Qoraalka Freebooter
Mareegaha ugu fiican ee laga soo saaro xarfaha cursive
Way fududahay inaad saacado ku qaadato inaad booqato shabakado kala duwan oo aad raadinayso far. Marar badan, xarfahani waxay noqon karaan kuwo tayadoodu hoosayso oo xataa aan dhamaystirnayn.
ka Mareegaha aan liis gareeyno waxay bixiyaan tayada ugu wanaagsan iyo buug-gacmeedyo dhammaystiran.
Mareegtan inta badan waa mid ka mid ah natiijooyinka ugu horreeya ee raadinta qoraalka. Waa maktabad aad ka heli karto in ka badan 800 oo qoys oo farta ah.
Google Fonts waa mid ka mid ah xulashooyinka aadka loo isticmaalo ee xirfadlayaasha naqshadeynta. Iyagoo xarfaha waa la soo dejisan karaa marka lagu daro ilo furan.
Boggan, waxaad ka heli kartaa xarfo tayo sare leh oo bilaash ah. Inta badan xarfaha aan ka heli karno Font Squirrel waa xarfo leh shati ganacsi.
Marka lagu daro buug-gacmeedka qoraalka, Font Squirrel waxa uu soo bandhigayaa a Soosaaraha farta webka ee kaa caawinaya in aad samaysato wejiyo kuu gaar ah. Sidoo kale, waxa kale oo ku jira aqoonsiga farta, kaas oo ka caawinaya in la baadho oo la helo xarfo ku salaysan sawirro.
Waan heli karnaa xarfaha bilaashka ah ee la soo dejisan karo, sidoo kale waxaa ku jira calaamado iyo agabyo kale. Alaabta la soo dejiyey waxay ku habboon yihiin PC iyo Mac labadaba.
Inta ugu badan ee farta qoraalka ah waa bilaash in la soo dejiyo, laakiin xaaladaha qaarkood waxaa jira xaddido isticmaalka, kuwaas oo ay tahay in dib loo eego, waxa laga yaabaa in loo isticmaalo shakhsi ahaan iyo mid aan ganacsi ahayn oo keliya.
Iyada oo ururin weyn, Font Space, ka kooban yahay in ka badan 30 kun oo xarfo oo bilaash ah oo ka kala yimid naqshadeeyayaasha kala duwan. Waad ku mahadsan tahay ururintan, waxaad ka heli kartaa foomamka bilaashka ah ee kala duwan ee mashaariicda shakhsi ahaaneed.
Farta ay Font Space soo bandhigtay waa xarfaha shatiga leh, oo kaliya oo la dul saaro cursorka ayaa ku tusi doona shatiga ka hor inta aanad soo dejin.
Haddii aad iska diiwaan geliso mareegahan, waxa aad fursad u haysataa in aad samaysato buug-gacmeedka gaarka ah ee xarfaha aad jeceshahay.
Fonts-kayga, ayaa leh mid ka mid ah buugaag far waaweyn oo u dhexeeya bogag fareedka kala duwan. Buug-yarahan, waxaad ka heli kartaa xarfaha lacag-la'aanta ah iyo kuwa lacagta leh labadaba.
Aalad horudhac u ah, Fonts My, waxay kuu ogolaanaysaa hab firfircoon, arag sida qoraalladaadu u eegi lahaayeen farta la doortay.
Waa mareegaha internetka, kaas oo ka kooban ururinta wejiyo tayo sare leh. Tiro badan oo ka mid ah xarfahan waa bilaash in la soo dejiyo, labadaba mashaariicda shakhsi ahaaneed iyo kuwa ganacsiba. Waa inaad dib u eegtaa shatiga ka hor inta aanad bilaabin soo dejinta.
Farta Abstract, waxay ku salaysan tahay a nidaamka qaybta si loo habeeyo xarfaha loona fududeeyo hagidda.
Ha ku kadsoomin magaceeda, 1001 Fonts, waxaa ku jira ilaa 10 kun oo farood oo kala duwan. Websaydhku waxa uu leeyahay ururinta xarfo tayo sare leh oo kala duwan oo bilaash ah.
Isaga oo maraya qaabka, cabbirka iyo fursadaha miisaanka, helitaanka xarfaha ayaa noqonaysa mid aad u fudud oo degdeg ah.
Isticmaalayaasha farta magaalada, waxaad ka heli kartaa a ururin si cadaalad ah u ballaaran ee weji-qoraalka. Dhammaan xarfaha wax-ku-qorista ee ku jira mareegahan waxa loo qaybiyay si waafaqsan qaybtooda.
Mid ka mid ah qalabka ugu sifada boggan waa isaga jinsiyadda iyo dhaqanka ikhtiyaarka ah ee xarfaha. Carabi, Shiineys, Cibraan, Giriig, Jabbaan iyo qaabka Ruushka ayaa laga heli karaa.
Waxaa laga yaabaa inaad xiisaynayso inaad Behance ka hesho liiskan, laakiin goobtan, waa naqshadeeyayaal badan oo horumariya mashaariicda lana wadaaga iyaga.
Maaddadan la wadaago, waxay noqon kartaa bilaash, oo aan awoodno hel xarfo bilaash ah Qalabka raadinta, natiijadu waxay ku tusi doontaa liis aan dhammaanayn oo ah xarfo si xor ah loo heli karo.
Qodobka wanaagsan ee Behance waa in xarfaha aad ka hesho boggan, waxay leeyihiin qaab gaar ah waxayna ka yar yihiin kuwa aad ka hesho boggaga kale.
Mid ka mid ah meelaha ugu caansan marka laga eego soo dejinta farta. Qaar badan oo ka mid ah xarfaha ay ka kooban tahay ayaa ah kuwo shakhsi ahaan loo isticmaalo, laakiin waxaan sidoo kale helnaa shatiyo ganacsi.
Dafont, wuxuu leeyahay ballaaran kala soocidda qoraalka, taas oo sahlaysa raadinta xarfaha, iyada oo ay ugu wacan tahay qaybaha.
Liisku wuxuu noqonayaa mid aan dhammaad lahayn, laakiin waxaanu tilmaanay mareegaha ugu muhiimsan ee aad ka soo saari karto farta aad jeceshahay.
Waraaqo xarrago leh oo xarrago leh
Xaaladeena waxaanu soo bandhigi doonaa xarfaha cursafka ugu xarrago badan oo aad ka heli karto mareegahan.
Far qoraal ah oo aad ku isticmaali karto mashruucyo kala duwan, Bolina, waa far lagu soo koobay qaab caadi ah. Waxay ka kooban tahay dhumucyo kala duwan oo istaroog ah.
Waa ikhtiyaarka ah in la siiyo dabeecad qurux badan naqshadeena. Qoraalka qoob ka ciyaarka, waa a qoraal casri ah iyo mid caadi ah, kaas oo xaraashyo waaweyn lagu xaraashayo xarafkeeda.
Pinyon Script, waa a nooca jaceylka ah, oo leh istaroog gacmeed oo wareegsan, kaas oo siinaya muuqaal cajiib ah oo qurux badan.
Xulashada farta cursive waxay ka kooban tahay walxaha qurxinta ee u dhexeeya jilayaasha. Waa qaab qoraal ah fudud oo aad loo akhriyi karo, iyo sidoo kale haysashada hawo dumar ah.
Ilo ah in mideeya qaabka fudud iyo casriga ah ee jilayaasha. Xarfaha xarafkeeda waxaa ka mid ah istaroogyo kala duwan, dhuuban iyo dhumucyo kala duwan, kuwaas oo noqda astaanta lagu garto nooca noocaan ah.
Iyada oo leh iftiin iyo istaroog dheer, Lovtony waxay noqotaa doorasho ku habboon cursasho xarrago leh. A qoraal hawo leh oo kugu duuduubay istaroogga.
typography leh jilayaal gaar ah iyo walxo qurxin curdan, kaas oo lagu siin karo taabasho qurux badan oo rasmi ah naqshadahaaga. Istaroogga qulqulaya iyo dhammaadka xarfaha ayaa khamaar nabdoon u ah wejiga xarrago leh ee xarrago leh.
Nooca wejiga leh a hawada jaceyl iyo sheeko gaar ah oo ka danbeysa, sida dhiirigelinta ka timid saaxiibtii naqshadeeyaha. Waa qoryo fudud oo istaroog aad u fudud leh. Jilayaasha kor u kacaya iyo kuwa soo degaya ayaa Miama ka dhigaya farta ugu habboon ee qoraallada yaryar.
Sidaad aragteen, halkaas tiro badan oo shabakado ah oo aad ka soo dejisan karto xarfo xarrago leh, si aad ugu darto buug-gacmeedkaaga iyo mashaariicdaada.
xarfo curis ah, ku darso xarrago iyo qurux mashaariicda lagu isticmaalo, samee qaab la safeeyey. Laakin maskaxda ku hay in xarfaha noocaan ah aysan si isku mid ah u shaqeyneynin dhammaan meelaha lagu dabaqo.
Qoraalku wuxuu noqday mid ka mid ah walxaha ugu muhiimsan ee shaqo kasta oo naqshadeyn ah, ha ahaato calaamad ama shabakad. Si aad u doorato qoraalka saxda ah, uma baahnid inaad khabiir ku tahay goobta, laakiin ogow sharcinimadeeda markaad la shaqaynayso.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad taqaanid farfaha muhiimka ah ee ay tahay inaan ku darno liiska, ha ka waaban inaad nagu soo qorto sanduuqa faallooyinka oo noogu dhaaf ra'yigaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Halkee laga helaa xarfaha curisyada ugu xarrago leh
Waa maxay sheekada ka dambeysa astaanta Lego?